Rohingya Students Forum: June 2019
Ek Fiyala Saa
Tuáñr fuñáti boi ek fiyala saá háitó sailam
Rong hora, siní becí, miçá háitó sailam
Beñha rasta fiçót gorí loi giyói aññré tulí
duré zaigói uzu rasta tuwai nó farí
Tuñár fuñáti boi ek fiyala saá háitó sailam,
Rong hora, siní becí, gorom háitó sailam
Saá-fata, siní ar gorur dud aññí anílam,
zaite zaite taim-or tongi gorom hái nó faillam
Ketéli-ttún goli fori nifí giyói tuñcór sulá,
tokdir-or najjol foñsa asé cúde mala
Tuñár fuñáti boi ek fiyala saá háitó sailám
Rong hora, siní becí, miçá háito sailám
Uñçót mazé fiyala lagai bazái raitó sailám
kismot-ór háwá mu firaiyé ki goríyúm aññí
Cít-khál e, kúwa guzori giyói saá hái nó faillám
ekka háñci, goppi sóppí mari no faillám
Lekóya: Ro Mehrooz
Posted by Rohang king at 7:31 AM
Labels: ရိုးရာ, poem, Rohingyalish
Posted by Rohang king at 12:48 AM
Labels: poem, theArtGardenRohingya
Hóñlá: A Traditional Song of Rohingya
ဟောံလားသည် ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာတေး တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မူလသီဆိုသူများ၏ အမည်များကိုမူ အသိရနည်းသည်။ ကျေးလက်ဒေသ၏ နေ့စဉ်ဘဝဖြစ်သော ရိုမူရိုရာများကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာကဗျာ အိုင်ချင်းနှင့် ခပ်ဆင်ဆင်တူသည်။ ဟောံလားတေး၏ ပိုဒ်ဆုံးတွင် ဟိုင်…ဟိုင် နှင့် အဆုံးသတ်ရသည်။
နမူနာ ဟောံလား တစ်ပိုဒ်
Nasito tuli diyé gura gura nattuá,
Naser de keñl lari la…ri…, mor haiñ haiñ re….
Amm fata lorer sorer hathol fata zoorer,
Hoinnar bourót hon góthana soler lé, mor haiñ haiñ re….
ဟောံလား ဟူသော စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ ကြာပန်း ဖြစ်သည်။ ဟောံလားတေးကို ပဒုမာကြာပန်းကဲ့သို့ အဆင့်ဆင့်ထပ် သာယာနာပျော်ဖွယ် သီဆိုရသောကြောင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဟောံလားကို အများအားဖြင့် မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲများတွင် သီဆိုလေ့ရှိသည်။ အမျိုးသမီးများ စုပေါင်း၍ ဝိုင်းဖွဲ့ သီဆိုရသော မင်္ဂလာ ရိုးရာတေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာ မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲများတွင် အမျိုးသမီးများက မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ အစားသောက်များ ပြင်ဆင်ရင်း ဟောံလားတေးကို သီဆိုလေ့ရှိသည်။ သီဆိုသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးက လင်္ကာသွားများကို ချိုသာသောအသံဖြင့် သီဆိုသည်။ ပိုဒ်ဆုံးတွင် ကျန်အမျိုးသမီးများက တညီတညွတ်တည်း “ဟိုင်…ဟိုင်…ရေ” နှင့် တဆွဲဆွဲ တငင်ငင်ဆိုကာ အဆုံးသတ်ရသည်။ ကျန်အပိုဒ်များကိုလည်း အလားတူ ဆက်လက် သီဆိုကြသည်။
ဟောံလားတေး တစ်ပုဒ်တွင် အနည်းဆုံး အပိုဒ် ၈ ပိုဒ် ပါရသည်။ တစ်ချို့တေးများသည် (၁၀) ပိုဒ် (၁၂) ပိုဒ်တောင် ဖွဲ့ဆိုကြသည်။ လင်္ကာ ပါဒတစ်ခုစီကို နှစ်ကြိမ်စီ ဆိုကြသည်။ သတို့သား၊ သတို့သမီး ဘွဲ့များကို ဒေသပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေနှင့် ဆီလျော်စွာ ဖွဲ့ဆိုကြသည်။ ဟောံလားတေးကို ပြုံးရွှင်ဖွယ် တစ်လှည့်၊ ဝမ်းနည်းဖွယ် တစ်လှည့်ဖြစ်အောင် သီဆိုရသည်။ သတို့သား အိမ်တွင် သီဆိုလျှင် သတို့သမီးဖက်ကို သရော်၍ မိမိဖက်ကို ချီးကျုးဂုဏ်မြင့်၍ သီဆိုကြသည်။ သတို့သမီးအိမ်တွင် သီဆိုလျှင် ပြောင်းပြန် သရော်၍ ဆိုကြသည်။
ဟောံလားတေးကို ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသာမက အာရ်ကာန်ပြည်၌ မှီတင်းနေထိုင်သော ဟီန္ဒူများ၊ မရမာကြီးများကလည်း မင်္ဂလာပွဲများတွင် သီဆိုကြကို တွေ့ရသည်။ မြို့ကြီးပြကြီးများတွင် ဟောံလားတေး သီဆိုသည့်ဓလေ့ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်သော်လည်း ကျေးလက်တွင်မူ “ဟောံလားမပါ မင်္ဂလာပွဲမမြောက်” ဆိုသည့်အထိ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သီဆိုခဲ့ကြသည်။ ရိုမင်္ဂလာပွဲ၌ နာခ်ျချာဓူလားတေး နှင့် ဟောံလားတေးမှာ အထူးထင်ရှားသည်။ (ရိုအညာမင်္ဂလာပွဲအကြောင်းကို အခြားစာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုပါရန်)
မိမိတို့ ဒေသပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့ရှိရသော ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား ရိုးရာဓလေ့ထုံးစံများကို RSF: International. FB page သို့လည်းကောင်း၊ ဘလောက်၏ ကောမန့် box တွင်လည်းကောင်း ပေးပို့ကာ ရိုဟင်ဂျာ ယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ထုတ်ရန် ဝိုင်းဝန်းကူညီနိုင်ပါကြောင်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Posted by Rohang king at 12:45 AM
Labels: ရိုးရာ, ရိုသမိုင်း, books, Gana, သုတ